भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाललाई ११ प्रश्न (अन्तर्वार्ता) — Sanchar Kendra
भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाललाई ११ प्रश्न (अन्तर्वार्ता)
नारायण ढुंगाना र नारायण अधिकारी, काठमाडौँ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुखको उम्मेदवार बनेकी रेनु दाहालले दोस्रोपटक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन्। उनी आफ्नो निकटतम् प्रतिस्पर्धीभन्दा १२ हजार ४४९ बढी मत ल्याएर महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएकी हुन्।
दाहालको अबको कार्यकाल कसरी बित्छ? अघिल्लो कार्यकालमा पूरा हुन नसकेका कामहरू यसपटक सम्पन्न गर्ने योजना बनाएकी छन्? महानगरवासीको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर नवनिर्वाचित प्रमुख दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
१.तपाईं आफ्नो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
२.तपाईंले दोस्रो कार्यकाललाई कसरी लिनुभएको छ?
३.तपाईंले किन पुनः महानगरको प्रमुखमा दोहोरिने निर्णय गर्नुभयो?
४.तपाईंको पाँच वर्षे कार्यकालमा संघीय सरकारको सहयोग कस्तो रह्यो?
५.तपाईंलाई प्रचण्डको छोरीका रूपमा नभई आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएँजस्तो लाग्दैन?
६.अबको कार्यकालमा सबै पक्षलाई समेटेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?
७.निर्वाचन अवधिभर भरतपुर चर्चाको केन्द्रमा रह्यो, खास त्यसको कारण के होला?
८.यहाँको पहिलो कार्यकालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा काम नै भएन भन्ने गुनासो छ नि?
९.जनतासँग यहाँको भावनात्मक सम्बन्ध राम्रो भएको निर्वाचन परिणमले देखायो, त्यसलाई कायमै राख्न सक्नुहुन्छ ?
दोस्रो कार्यकालको पदबहाली गर्दैगर्दा तीन वटा महत्वपूर्ण कार्य गरेका छौं। भरतपुरमा छोरीहरू जन्मनेबित्तिकै बीमाको सुरूआत गरेका छौं। विपन्न समुदायलाई लक्षित गरेर सात हजार लिटर पानी निःशुल्क गरेका छौं।
अर्काे भनेको भूमिहीनलाई लालपूर्जाको कुरा पनि छ। यस्तै हामीले विगतमा पनि महिलासँग मेयर, जोखिममा परेका समुदायसँग मेयर भनी महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर गौरवको कार्यक्रम राखेका छौं। यो जोखिममा परेका समुदाय र महिलालाई लक्षित गरेको कार्यक्रम हो।
१०.तपाईंले गर्न चाहेको तर पाँच वर्षमा गर्न नसकेका त्यस्ता अधुरा काम केही छन् कि ?
११.अबको कार्यकालमा तपाईंले गौरव गर्न लायक कुन–कुन योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ?